ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Osset Isi-Ukraine Isi-Umbundu IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreki IsiGun IsiHausa IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMalta IsiMoore IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTurkmen IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Nakhu okudingeka ukucabangele
Umthetho endaweni yakini ufuna ufunde uze ufike kuliphi ibanga? Usufikile yini wena kulelo banga? Uma ungasilaleli iseluleko seBhayibheli ‘ sokuzithoba emagunyeni aphakeme, ’ usiyeke isikole ungakaliqedi lelo banga, uyobe usishiya phansi isikole.—Roma 13:1.
Ingabe usuyifinyelele imigomo yemfundo ozibekele yona? Imiphi imigomo ofuna imfundo ikusize uyifinyelele? Awazi? Kudingeka wazi! Ngaphandle kwalokho, uyobe ufana nomuntu ogibele isitimela kodwa ongazi ukuthi ufuna ukuyaphi. Ngakho hlala phansi nabazali bakho, nixoxe ngengxenye engezansi ethi “Imigomo Yami Yokuthola Imfundo.” Uma uyeka isikole ungakayifinyeleli imigomo yemfundo wena nabazali bakho enivumelene ngayo, uyobe usishiya phansi isikole.
Ukuyeka isikole kufana nokugxumela ngaphandle kwesitimela ungakafiki lapho uya khona
Kungani ufuna ukuyeka isikole? Ezinye zezizathu zingaba ukusiza umkhaya wakini ngokwezimali noma ukungenela inkonzo yokuzithandela. Izizathu zobugovu zingaba ukubalekela izivivinyo noma umsebenzi wesikole. Inselele iwukuqonda ukuthi isisusa sangempela siyini—nokuthi siyezwakala yini noma esobugovu. Uma uyeka ngoba ubalekela izinkinga, uyozisola.
Ukushiya phansi isikole kufana nokwehla esitimeleni ungakafiki lapho uya khona. Kungenzeka awuhlezi kamnandi esitimeleni futhi abagibeli abanamusa, kodwa uma ugxuma uphumele ngaphandle kwesitimela, ngeke ufike lapho uya khona futhi ungase ulimale kabuhlungu. Ngokufanayo, uma usishiya phansi isikole, kungase kube nzima kakhulu ukuthola umsebenzi. Uma uwuthola, cishe uyobe ukhokhela kancane kunalowo obungawuthola ukube uye waphothula esikoleni.
Kunokuba usishiye phansi isikole, bekezela, uxazulule izinkinga obhekana nazo esikoleni. Ngokwenza kanjalo, uzokwazi ukukhuthazela futhi uyokulungela kangcono ukubhekana nezinselele ezifanayo lapho ususebenza.
Imigomo Yami Yokuthola Imfundo
Injongo eyinhloko yemfundo ukukulungiselela ukuba uthole umsebenzi ozokusiza ukuba uzinakekele futhi wondle umkhaya okungenzeka ube nawo. (2 Thesalonika 3:10, 12) Ingabe usunqumile ukuthi ufuna ukwenza hlobo luni lomsebenzi nokuthi isikole sizokusiza kanjani ukuba uwulungiselele? Ukuze ubone ukuthi izifundo zakho zikuyisa endleleni okuyiyona yini, phendula le mibuzo elandelayo:
Yimaphi amakhono enginawo? (Ngokwesibonelo, ingabe usebenzelana kahle nabantu? Uyakujabulela yini ukusebenza ngezandla noma ukwenza noma ukulungisa izinto? Ingabe uyakwazi ukuhlaziya nokuxazulula izinkinga?)
Yimiphi imisebenzi ezongenza ngikwazi ukusebenzisa amakhono ami?
Amathuba amiphi imisebenzi akhona ngakithi?
Yiziphi izifundo engizifundayo manje ezizongisiza ngithole umsebenzi?
Yiziphi izifundo engingazenza manje eziyongisiza ngifinyelele imigomo yami kalula?
Khumbula, umgomo wakho uwukuphothula unemfundo ongayisebenzisa. Ngakho, musa ukufunda into engapheli—kuhle komuntu ohlezi esitimeleni angehli ngoba nje ufuna ukubalekela imithwalo yemfanelo yokuba umuntu omdala.
Utshwala nezidakamizwa, ukuziphatha okubi ngokobulili, ukuthandana nomuntu nokuqomisana kungezinye izihloko okukhulunywa ngazo.